Soo Celinta ah Barzakh, Lost, Soo Celinta Files / Data ee ah Barzakh, Lost
> Resource > Ladnaansho > Sidee soo celinta ah Barzakh, Lost
Dhowrkii bilood ee la soo celiyo mid ka mid ah saaxiibkay ayaa abuuray image Ruuxa ah "C" Drive iyo shalay markii uu reinstalling ahaa Windows XP isticmaalaya CD Ruuxa oo uu ku abuuray, ka dib markii la rakibey Ruuxa, wuxuu arkay in xijaab D drive ka luntay oo u muuqatay in ay ku milmaan iyadoo C drive. Waxa uu i weydiistay inaan caawiyo in sida loo soo celin Risaalo ka lumay iyo xogta laga badiyay xijaab D?
Xaaladda leh "badiyay" xijaab caadi ahaan baxdo marka Windows OS waxaa lagu meeleeyey ama marka a addoon / drive dibadda adag waxaa u dhaqaaqay computer kale. Hagaha soo socda waxa ku qoran, waayo, dadka isticmaala Windows in sida loo soo celin xijaab lumay iyo soo celinta xogta ku sugan.
Habka 1 in la soo celiyo xijaab lumay:
Si aad u soo celin xijaab lumay , marka hore waxaad u baahan tahay in la ogaado in haddii ay xijaab waxaa laga garan karaa habka ama ma waxay ku xiran tahay qaybta miiska xijaab iyo kabaha. Haddii Risaalo ka badiyay muujinaysaa ilaa in Manager Device iyo maamulka digsi, laakiin UMA in "My Computer", waxaa jira fursad ah in ay tahay "kaliya" qaybta miiska xijaab / boot in uu maqan yahay ama musuqmaasuq. Sidaas Risaalo ka muuqataa badiyay iyo faylasha waxay ku noqon aan la arki karin.
Waxaad isticmaali kartaa module-kabashada ah Barzakh, ee Wondershare ka Data Recovery in ay soo celiyaan xijaab lumay miiska iyo mar kale u helaan xogta aad ee in xijaab lumay. Ma bedeli doono ama u qor aad disk adag si aad u isticmaali kartaa istareexsan.
Habka 2 in la soo celiyo xijaab lumay:
Haddii Recovery ah Barzakh, ma shaqeeyaan in miiska xijaab lumay lama hagaajin karo, ka dibna isku day in aad hab-kabashada Wizard si toos ah loo soo celiyo files / data ku Risaalo ka lumay aan hagaajinta miiska xijaab lumay. Ka dib waa tallaabooyinka fudud:
Soo Celinta xijaab tallaabo lumay 1:
Demi in hab kabashada Wizard.
Soo Celinta lumay xijaab talaabo 2:
Calaamadee "dhammaan faylasha" iyo "Computer oo dhan" si ay u bilaabaan iskaanka.
Soo Celinta lumay xijaab tallaabada 3:
Ka dib markii ay gool iskaanka ah, waxaad heli doontaa liiska dhammaan faylasha recoverable sida kor ku xusan. Dooro kuwa aad u baahan tahay oo ay sii wadaan.
Kabashada card SD Micro